China 24kV 200A Rotatable Feedthru Insert ifektri abakhiqizi | Anhuang
U-Anhuang okhethekile ku-Rotatable Feedthru Insert, sinikezela ngekhwalithi ephezulu ye-Rotatable Feedthru Insert. Imikhiqizo yethu iyavumelana namazinga we-IEEE386, ne-IEC.
Ukufaka okungama-24kV 200A okujikelezayo kokuphakelayo kusetshenziselwa ukuhlinzekela ama-bushings amabili kusuka esikhungweni esisodwa semishini kahle. Kwenza ukuguqula ama-radial-feed transformers ukondla ama-transformer nokungeza ukuvikelwa kokubanjwa okuku-inthanethi okulula futhi okusebenzayo. I-ratchet yayo enelungelo lobunikazi, eyakhelwe ngaphakathi, evimbela ama-opharetha ekuphuleni ngengozi izikopelo zemithombo ngesikhathi sokufakwa.
Isixhumi se-200A Double-pass casing sokuxhuma ikhebula elingaphansi komhlaba kusistimu yamandla okusabalalisa ye-pad-mound transformer, ibhokisi legatsha elinikezela ugesi, usebenzisa kanye nalokhu: umthwalo wekhefu lokuxhuma indololwane indololwane yokubopha kanye ne-aparasi bushing.
Izindololwane ze-Load break zibunjwe kusetshenziswa i-EPDM yerabha ephulukisiwe esezingeni eliphakeme futhi eqhuba kancane, lapho ihlanganiswe nemikhiqizo elinganisiwe ngokulinganayo, okufakwayo kuhlinzeka ukuxhumana okuvikelwe ngokuphelele futhi okucwilikayo kokuthwala umthwalo.
Indandatho yesibonisi se-Double-pass casing connector latch, etholakala kuzungezo lukakhola we-bushing, iqeda umsebenzi wokuqagela wokufakwa komgogodla we-break break ku-interface ye-bushing. Iringi ekhanyayo ephuzi inikeza impendulo ngokushesha ukuthola ukuthi indololwane ifakwe kahle yini esihlahleni. uma indandatho ephuzi imbozwe ngokuphelele ngendololwane yokugqashuka komthwalo, igcwele ngokuphelele, uma indandatho ibonakala, indololwane ingafakwa kahle ngaphambi kokuba kuvele izinkinga.
Langaphambilini Ukushisa kahle
Olandelayo: 15kV 200A Rotatable Feedthru Faka
Bushings Futhi Ifaka
I-Insulated Stand Off Bushing
15kV 200A Elbow Ocacile